Lammiileen Itoophiyaa 64 Mozaambikitti konkolaataa keessatti ukkaamfamanii du'an - BBC News Afaan Oromoo
Lammiileen Itoophiyaa 64 Mozaambikitti konkolaataa keessatti ukkaamfamanii du'an
Image copyright GIANLUIGI GUERCIA
Goodayyaa suuraa Namoonni godaantota Afrikaa Kibbaa geessan Maalaawwii keessa qaxxaamuruun magaalaa Mozaambiik Teetee jedhamtu keessa dabarsuun beekamu
Lammiileen Itoophiyaa 64 karaa seeraan alaa gara Afrikaa Kibbaatti imalaa turan Mozaambikitti konkolaataa keessatti ukkaamfamanii du'uu Afrikaa Kibbaatti Ambaasaaddarri Itoophiyaa Dr Shifarraaw Takilamariyaam BBC'f mirkaneessan.
Lammiileen kuni konkolaataa Maalaawii irraa gara Mozaambiik qaxxaamure keessa du'anii argaman jedhameera.
Guyyaa har'a Kibxata ganama kannene du'aniin alatti namoonni 14 lubbuun oolan bulchiinsa Lixa Mozaambiik Teetee jedhamtutti argamaniiru.
Haala imala isaanii fi du'aatii isaanii ilaalchisee mootummaa Moozaambik waliin taanee adda baasuuf hojjechaa jirra jedhu Ambaasaaddar Shifarraawu.
"Karaa ministera dhimma alaa keenyaa ibsi gaddaa darbeera. Namootni kunneen Maalaawii irraa gara Moozaambikitti imala taasisaa osoo jiraniiti haala suukaneessaa taheen rakkoon kun kan mudate."
Tamsaasa kallattii koronaavaayirasii irratti argachuuf
Odeeffannoo amma yoonaa argataniin namoonni kunneen konteenara keessati ukkaamfamanii du'uu akka hin oolle shakkama jedhu.
Namoota lubbuun oolanii fi ragaa harka isaanii irra jiru irraa waan mudate adda baasuuf hojjechaa jirra jedhu.
Immigireshiniin biyyichaas miidhaan kun akkamiin akka qaqabe irratti qorannoo gaggeessaa jira kan jedhan ambaasaaddarichi, namoota 78 keessaa namoota 14 qofatu lubbuun hafe jedhu.
Namootni lubbuun oolanis yaalii argataa jiraachuu isaanii BBC'tti himaniiru.
Erga qorannoon barbaachisu xumuramee haala awwaalcha isaanii irratti waan murteessinu taha jedhan.
MM Abiy Ahimad du'a namoota kanaan gadda itti dhagaa'ame ibsanii, eenyummaan namoota kanneenii adda baafamaa jira jedhan.
Akkamiin duuti isaanii dhagaahame?
Almmileen Itoophiyaa kunneen du'uun isaanii kan barame hojjettoonni immigireeshinii mootummaa Mozaambiik magaalaa Mowaatizee keessatti konteenara erga dhaabsisaniin booda akka ta'e qondaalli mootummaa biyyattii himaaniru.
Hoggantuun dhimmi fayyaa bulchiinsa magaalaa Teetee Aadde Kaarlaa Moose akka jedhanitti lammiileen Itoophiyaa kunneen akkamiin akka du'an baruf qorannoon itti fufeera.
Ta'us, konteenara keessa ukkaamfamanii akka du'an ni shakkama jedhan.
Goodayyaa suuraa Magaalaa Teetee
Dubbii Himtuun Tajaajila Godaantota Biyyaalessaa Mozaambik Aadde Ameeliyaa Direriyoo akka jedhanitti konkolaachisaan yeroo gaafatamu konkolaataa dhaabuu didee ture.
Taanzaaniyaatti lammiileen Itoophiyaa 1,900 hidhaa keessa jiru
Akka isheen ibsiteetti, konteenara keessaa sagalee namaa akka dhagahaniifi godaantonni keessa akka jiran shakkan.
Karaan kuni karaa beekamaa namoonni Afrikaa Kibbaa gahuuf adeeman filatanidha.
Adde Ameeliyaa Direyitoon akka jedhanitti 14 kanneen lubbuun hafanif qorannoon koronaavaayirasii ni taasifama jedhameera.
Lammiileen Itoophiyaa jireenya fooyya'aa barbaacha gara Afrikaa Kibbaa yeroo imalan yeroo lubbuu dhaban kuni kan duraa miti.
Bara darbe lammiileen Itoophiyaa 14 taha Konteenerii fe'umsa meeshaaleef oolu keessa galuun karaa seeraan alaa Tanzaaniyaadhaa ka'anii Afrikaa Kibbaa galuuf osoo yaalanii ukkaamamanii qilleensa dhabuun isaanii ni yaadatama.
Koronaavaayiras: Hojjettoonni mootummaa federaalaafi magaalaa Finfinnee manaa akka hojjetan murta'e
MM UK - Booris Joonsan wallaansa addaa argachaa jiru
Sirni owwaalcha lammii Itoophiyaa koronaavaayirasiin du'anii mootummaan raawwatame
Weerarri koroonaavaayirasii yoom xumura argata?
Namichi sigaaraa 'rakasaaf' Ispeenii gara Faraansaay miilaan imalaa ture to'atame